japansandesh – Japan Sandesh
japansandesh — November 14, 2017 comments off
टोकियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीको केन्द्रिय सदस्यमा कलेन्द्र विक्रम शाहीलाई मनोनित गरेका छन् ।	Read more »
japansandesh — November 8, 2017 comments off
टोकियो । हाई स्कुल अध्ययनरत छात्रासंग यौन दुराचार गरेको आरोपमा १ वर्षपछि दुई नेपालीलाई जापान प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सिजुओका प्रान्तको सिजुओका शहरमा बसोबास गर्ने दुई नेपाली जापानको...	Read more »
कानागावाको एक अपार्टबाट ९ जनाको लाससहित कोठामा बस्ने पक्राउ
japansandesh — October 31, 2017 comments off
टोकियो । कानागावा केन जामा सीको एक अपार्टमा ९ जनाको लास भेटिएको छ । अमेरिकी सेनाको ब्यारेक नजिकैको अपार्टमा लासहरु टुक्रा टुक्रा बनाएर कुलर बक्सभित्र राखिएको अवस्थामा भेटिएको हो...	Read more »
टोकियो । काम गर्ने मनसायले जापानमा बढिरहेको नक्कली शरणार्थी सम्वन्धमा न्याय मन्त्रालयले छ महिना नाघेपछि सामान्य रुपमा दिदै आएको वर्क परमिट सिस्टम खारेज गरि वर्क परमिट व्यापक रुपले कटौती...	Read more »
टोकियो । विद्यालयले आफ्नो खैरो कपाल कालो बनाउन लगाएको भन्दै जापानमा एक किशोरीले विद्यालयविरुद्ध स्थानीय सरकारमा उजुरी दिएकी छन् । ओसाकास्थित विद्यालयले निरन्तर आफ्नो कपाललाई कालो बनाउन दबाब दिएको...	Read more »
ट्रम्पको कुटनीति : जापान नजिक, चीन टाढा, कोरिया अझै गाढा, एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा अब के हुन्छ ?
japansandesh — April 2, 2017 comments off
काठमाडौँ । अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसन हालैको उत्तरपूर्वी एसिया भ्रमणले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई उक्त क्षेत्रमा रणनैतिक सम्बन्ध स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण मौका बनेको छ ।	Read more »
जापानकी माओरी तेजुका, जस्लाई अब पोर्नका पारखीले देख्ने छैनन्
जापान । यौन चलचित्र प्रेमी जापानी प्रौढहरुकी प्रिय नायिका माओरी तेजुकाले अश्लिल चलचित्रबाट अवकाश लिएकी छन् । माओरी ८० वर्षकी भइन् । जापानमा ६५ वर्षमाथिका साढे ३ करोड जनता...	Read more »
जापानी विदेश मन्त्रीले किन गरे आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन ?
japansandesh — April 1, 2017 comments off
टोकियो । जापानका विदेश मन्त्री फुमियो किशिदाले क्षेत्रिय शान्ति र स्थिरताका लागि जापान र दक्षिण कोरियाका बीच स्थिर द्धिपक्षीय सम्बन्ध आवश्यक रहेको बताउका छन् । शुक्रबार दक्षिण कोरियाका भुतपुर्व...	Read more »
जापानमा साकुराको स्वागत, हेर्नुहोस् छ तस्वीर
टोकियो । जापानको राष्ट्रिय फुल साकुरा, विश्वकै सुन्दर फुल मध्येमा एक हो । यतीबेला जापानमा साकुरा फुल्ने मौसम हो । मार्च दोस्रो सातादेखि अप्रिलको दोस्रो सातासम्म जापानभर साकुरा फुल्ने...	Read more »